Sw Anand Arun’s Interview in Karobar Dainik, National Daily Newspaper- हामी जे छौं त्यसैमा रमाउन सक्नुपर्छ | Osho Tapoban: An International Commune And Forest Retreat Center, Kathmandu, Nepal
Articles » Sw Anand Arun’s Interview in Karobar Dainik, National Daily Newspaper- हामी जे छौं त्यसैमा रमाउन सक्नुपर्छ	Sw Anand Arun’s Interview in Karobar Dainik, National Daily Newspaper- हामी जे छौं त्यसैमा रमाउन सक्नुपर्छ
Posted on Aug 17, 2012 in Articles, Events, Gallery, Interviews, Links, Media, News, Press	TweetEmail
TweetEmailInteresting full page interview of Sw. Anand Arun published in Karobar Dainik, 17 Aug 20112. The reporter states that Swami Arun is not onlyagreat spiritual orator butavery intelligent economist.
Read the interview in Karobar Dainik online
प्रस्तुति: प्रकटकुमार शिशिर
काठमाडौं बालाजु नजिकै रहेको ओशो तपोवन आध्यात्मिक चिन्तन र ध्यानका लागि चर्चित छ । यसका प्रमुख आनन्द अरुण आध्यात्मिक र ध्यानमात्र होइन अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थशास्त्री जस्तो विचार राख्न पोख्त मानिन्छन् । कुराकानीका क्रममा पटक–पटक अरुणले मानिस धनी र सम्पन्न नभई आध्यात्मिक चिन्तन गर्न नसक्ने बताए । इन्जिनियर पेसामा लामो समय बिताएर आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गरेका अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष पनि छन । आध्यात्मिक चिन्तनमा लागिपरेका अरुण ओशो प्रवचनकै सिलिसिलामा दुई दर्जन मुलुक पुगिसकेका छन् ।
भारतमा ओशो रजनिशलाई भेटेपछि प्रभावित भई ओशो भक्त भएको बताउने अरुणको भौतिक विकास र आध्यात्मिक विकास सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विज्ञान प्रविधि र अध्यात्मबीचको सम्बन्धसहित पूर्वीय र पश्चिमा मुलुकको अवस्था तथा उनको जीवन आयामका विषयमा ओशो तपोवनमा कार्यकारी सम्पादक विजय घिमिरे र संवाददाता प्रकटकुमार शिशिरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
इन्जिनियर पेसाबाट यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो ?
म सानैदेखि अध्यात्म खोजमा हुन्थें । गुरुहरूको पछाडि लाग्थें । आश्रम जान्थें । त्यस्तै किताब पढ्थें । कलेज लाइफ पनि त्यस्तै भयो । बाध्यतावश पेसा गर्नुप¥यो, तर मलाई भित्रैदेखि जोगी बनौं अध्यात्म गरौं भन्ने थियो । बाबुआमाको पैसामा हुर्किएपछि उहाँहरूले गर्न भनेको काम गर्न बाध्यता थियो । जब आर्थिक स्वतन्त्रता भयो अनि मैले अध्यात्मतिर समय दिन थालें । मेरो अहिले पनि कम्पनी छ, बीडीएको अध्यक्षका रूपमा छु । काम गरेको भए बैंकमा पैसा जम्मा हुन्थ्यो होला, तर क्वालिटी लाइफ हुँदैनथ्यो । त्यसैले अध्यात्ममा फुल टाइम लागेको हो ।
त्यो जीवनबाट यो जीवनमा आउँदा कस्तो लाग्यो त ?
अहिले खुब आन्नद छ । संसारको सबैभन्दा खुसी मान्छेमध्ये म एक हुँ । म विदेश जाँदा कसैलाई भेट्दा आफूभन्दा सुखी मान्छे म भेट्दिनँ । म धेरैलाई समस्यामा देख्छु । समस्या किन छ भने तिनीहरू केही चाहन्छन् । मलाई केही चाहिँदैन । मेरो आवश्यकताहरू घटेका हुनाले म धेरै सुखी छु ।
त्यसो भने मान्छेहरू सुखी त आवश्यकता घटाएपछि हुँदा रहेछन ?
आवश्यकता घटाएर त हुँदैन । मानिसमा दुई स्वभाव हुन्छ । एउटा हुनु (बिइङ्ग) र अर्काे बन्न खोज्नु (बिकमिङ्ग) । संसार अहिले बन्न खोजिरहेको छ । यदि तपाईं पत्रिकाको सहसम्पादक हुनुहुन्छ भने सम्पादक बन्न खोज्नुहुन्छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेका छन् । धनी अझ धनी बन्न खोजिरहेका छन् । हुन खोज्नेमा हाम्रो ध्याउन्न हुँदा भएकोमा हामीले कहिल्यै आनन्द लिन सक्दैनौं । कुनै दिन अहिले भएको स्टाटस पनि हाम्रो बिकमिङ थियो । अहिले एचिभ गरियो भने अहिले रमाउनुपर्ने होइन र ? अध्यात्मले यही कुरा सिकाउँछ कि जे हामी छौं त्यसैमा रमाउन सक्नुपर्छ ।
ध्यान भनेको जे छ, त्यसमा रमाएर सन्तोष लिने कला हो । आधा घण्टा बिहान परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यो कुरामा रमाउनुभयो भने अर्थात् बिकमिङ्गबाट बिइङ्गमा रिल्याक्स गर्नुभयो भने त्यो नै ध्यान हो । ध्यान अब विकल्प रहेन, ध्यान योगी, जोगीले मात्र गर्ने कुरा भएन, स्वस्थ्य जीवनका लागि हरेकले गर्नु आवश्यक छ । मानसिक तनाव, पागलपनको लक्षण देखिएको छ । यी सब ध्यानको अभावले गर्दा हो । विकसित मुलुकमा किशोरहरूमा तनाव बढिरहेको छ । ज्यान लिने क्रम बढिरहेको छ । विकसित मुलुकमा पैसा कमाउन, घर बनाउने, तर केका लागि बाँच्ने ? त्यसको उत्तर छैन ।
तपाईंले ओशोलाई नै किन रोज्नुभयो ?
उहाँको टिचिङ धेरै राम्रो र वैज्ञानिक थियो । ओशोजत्तिकै कन्सियसमा माथि पुगेको गुरु अहिलेसम्म मैले देखेको छैन । तीन जनाको चेतनाले मलाई प्रभावित बनाएको छ । एउटा मलाई शिव भगवान् । जसले ध्यानको मार्ग खोल्नुभयो । ध्यानको आदिगुरु पनि हुनुहुन्छ शिव । शिवले जहाँ–जहाँ टेक्नुभयो त्यहाँ–त्यहाँ तीर्थाटन भयो । उहाँले जहिले पनि असल प्रेमी भएर आफ्नो प्रेमिकालाई नै विवाह गर्नुभयो । त्यसपछि म कृष्णलाई देख्छु । कृष्ण राजा पनि हुनुहुथ्यो, जोगी पनि बन्नुभयो । युद्ध पनि गराउनुभयो । शान्तिको सन्देश पनि लिएर जानुभयो । उहाँका १६ हजार प्रेमिका पनि थिए । उहाँका प्रेमिकाले अध्यात्ममा कुनै बाधा भएको पनि देखिएन । उहाँ पूर्ण पुरुष हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग सबै विधा थिए । त्यस्तै त्यस्तो गुण म ओशोमा देख्छु, जसमा कुनै कुराको विरोध छैन । सम्पन्नतामा बाँच्नुभयो । अध्यात्मको उच्च प्रशिक्षण दिनुभएको छ । अहिले शिव र कृष्ण हुनुहुन्न, मैले ओशोलाई भेटेर प्रभावित भएपछि मेरो तन मन धन उहाँप्रति समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भयो र यो ओशो युग भएकाले म ओशोका पछाडि लागे ।
धन सम्पत्तिलाई हामीले भौतिक भन्छौं, ध्यानलाई हामीले आध्यात्मिक भन्छौं, यो दुई कुराबीच केही सम्बन्ध छ ?
एकदम अन्तरसम्बन्ध छ । कति टाढा रहेको तारा र हामीबीच त सम्बन्ध छ भने यी दुई कुराबीच सम्बन्ध नहुने कुरा भएन । धन–सम्पत्ति कमाउन पनि त ध्यान, प्रतिभा, चेतना, जाँगर, लगाव चाहिन्छ । त्यसैले पैसा कमाउने पनि एक प्रकारको ध्यान हो । ध्यान गर्नै पनि उत्तिकै र उस्तै मेहनतको आवश्यक छ । आध्यात्मिक चिन्तन प्राप्त गर्ने पनि भौतिक सुविधा पाउनुभन्दा गा¥हो छ ।
पैसाले सुविधा दिन सक्छ तर सन्तोष दिन सक्दैन । सुविधा र सुख फरक हुन् । त्यसैले पैसाले सुविधा जुटाउन सक्छ तर, सुख ल्याउन सक्दैन । सुविधामा पनि मान्छे दुःखी हुन सक्छ र असुविधामा पनि मान्छे सुखी हुन सक्छ । त्यसैले आर्ट अफ लिभिङसँग जीवन जिउनुपर्छ ।
के हो आर्ट अफ लिभिङ भनेको ?
हरेक व्यक्तिको भित्रैदेखिको चाहना र आध्यात्मिक खोज भनेको ऊ आनन्दित हुन चाहन्छ । हामी जे काम पनि आनन्द हुनलाई गर्छाैं । अरूलाई चोट नपु¥याइकन आफ्नो जीवन आनन्दसँग जिउने कला नै आर्ट अफ लिभिङ हो ।
भौतिक सुख–सुविधा नभएपछि आर्ट अफ लिभिङमा जानुपर्ने हो ?
आर्ट अफ लिभिङ त सबैलाई चाहिन्छ, तर के हो भने जबसम्म बाहिर असन्तोष हुँदैन तबसम्म मान्छे यसको खोज नै गर्दैन । तनाव नभएसम्म मान्छे यसको खोज नगर्ने भएकाले तनाव पनि चाहिँदो रहेछ । अधिकांश मान्छे त विवाह र यौनमै रमाइरहेको हुन्छ । त्यसैले असन्तोष भयो भने मात्र आर्ट अफ लिभिङ खोज्ने अवस्था आउँछ ।
यहाँ त पहिला इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, त्यो पेसाबाट यो क्षेत्रमा आउँदा यहाँले पेसाप्रति उपेक्षा गरेजस्तो लाग्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बरु बढी नै समय पेसामा भएजस्तो लाग्छ । पेसाबाट छुट्टी नै लिएर अहिले फुल टाइम नै यसमा लागेको छु । मैले ३५ वर्ष पेसा गरे । फुल टाइम नै पेसा गरें र सँगसँगै अध्यात्म पनि गर्थें र पाँच वर्षदेखि पूरै समय अध्यात्म गरिराखेको छु । मलाई के लाग्छ भने यसमा जति सुख छ त्यो अरूमा हुँदैन । मैले यसमार्फत समाजलाई जति योगदान पु¥याएको छु त्यति अरू पेसाबाट पु¥याउन सक्दिनथें होला ।
कतिपय सफल र सामाजिक व्यक्तित्व बनाएपछि आध्यात्मतिर आउँछन् । के सबै कुरा पुगेपछि आउने क्षेत्र हो यो ?
हामीकहाँ के धारणा छ भने धर्म–कर्म गर्ने उमेर गएपछि हो । उमेरमा त खानु–लाउनुपर्छ, मोजमस्ती गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । तर, यसमा म सहमत छैन । जसले जगत्मा ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेका छन् ती सबै युवाअवस्थामा गरेका छन् । बुद्धले पनि २९ वर्षको उमेरमा घर छोड्नुभयो, विवेकानन्दले पनि १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो कर्म गर्नुभएको थियो । युवा अवस्थामा रगतमा शक्ति हुन्छ । ज्यानमा उत्साह हुन्छ । जाँगर हुन्छ, केही गर्ने जोस हुन्छ । आत्मविश्वास हुन्छ । त्यसैले हरेक राम्रो काम युवाअवस्थामा नै हुन्छ । चाहे कसैले किताब लेखोस् । चाहे कुनै सिर्जनशील काम गरेर चर्चामा आएको मान्छे होस्, ती प्रायः युवाअवस्थामा नै गरेको पाइन्छ ।
मानिसले सत्रौं शताब्दीमा कल्पना गरेको भौतिक सुख–सुविधा अहिले पाइरहेका छन्, त्योभन्दा अघिदेखि नै आध्यात्मिक कार्य हुन्थ्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि यी कुरा समान रूपमा उठिरहेका छन् । अध्यात्म अझ अघि जाने अवस्था छैन र ?
हामी अब एउटा टर्निङ प्वाइन्टमा आइसकेका छौं । १७ देखि १९ औं शताब्दीमा मान्छेको परिकल्पना जे थियो, जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खान लाउन पुग्यो भने मान्छेलाई सुखसुविधा हुन्छ भन्ने थियो । अझै पनि म जति पनि देशमा ध्यान र योगको माध्यमबाट पुगेको छु, ती सबै विकसित र सम्पन्न मुलुक हुन् । त्यहाँ स्वास्थ्य छ, कोही बिरामी भयो भने दुई मिनेटमा अस्पताल पु¥याउँछ । बिमा छ । सब थोक छ, तर पनि जीवन अझै दुखी छ । १७ औं शताब्दीमा जति मान्छे हाँस्थे, मुस्कुराउँथे जति राम्रोसँग सुत्थे अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । साक्षरता बढे पनि, स्वास्थ्य राम्रो भए पनि, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढे पनि, रोड चिल्लो भए पनि मान्छेको जीवन त आनन्दित हुन सकिरहेको छैन । मान्छेको जीवन त झन् दुखी बन्दै गएको छ । त्यसैले पश्चिमा यो विषयमा सोच्न थालेका छन् । हामीकहाँ बरु कसरी बाँच्ने भन्ने मात्र सोच छ । तर पश्चिमाहरूमा आनन्दित कसरी हुने भन्ने सोच आउन थालिसकेको छ । त्यसैले क्वालिटी जीवन जिउनका लागि मान्छे अब आध्यात्मिक हुन थाल्छन् ।
विज्ञान र प्रविधिबिनाको अध्यात्म हुन सक्छ ?
सक्दैन, यस्तो भयो भने झन् हामी १४ औं शताब्दीतिर पुग्छौं । छिमेकी तिब्बतमा यस्तो अभ्यास भएको थियो तर त्यो चल्न सकेन । त्यहाँ गुम्बाहरू धेरै धनी भए । लामाको खाने प्लेट, थाल सबै सुनैसुनको हुन्थ्यो । उनीहरूलाई गाउँलेहरूले बोकेर हिँडाउँथे । उनीहरूको जीवन धनी बन्दै गएको थियो, तर समाज यति दरिद्र बन्दै गयो, यति गरिब बन्दै गयो कि त्यो समाज टिक्न सकेन । त्यसैले विज्ञान र प्रविधिबिना अध्यात्म टिक्न सक्दैन र अध्यात्मबिना विज्ञान र प्रविधि पनि टिक्दैन । यी दुवै परिपूरक छन् । यी दुवै समान भयो भने जीवन खुसी हुन्छ । हामीकहाँ अध्यात्म बढी छ । काठमाडौं मन्दिरैमन्दिरको सहर हो, तर अध्यात्मले मात्र पनि त खुसी दिएको छैन । पानी फोहर छ । लोडसेडिङ छ । अनेक समस्या छन् । त्यसैले अधिक आध्यात्मिकबाट हामी पनि ग्रसित भएका छौं । त्यसैले जति भौतिक विकास हुन्छ त्यति नै आध्यात्मिक विकास हुनुपर्छ र जति आध्यात्मिक विकास हुन्छ त्यति नै भौतिक विकास हुनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले कस्तो अवस्था छ ?
नेपालमा त भौतिक विकासको अवस्था न्यूनतम छ । दक्षिण एसियामा हामी धेरै गरिब छौं । अफगानिस्तानमा त अझै युद्ध चलेको छ, त्यहाँको कुरा छोड्ने हो भने आर्थिक विकास हाम्रो भएकै छैन । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । भौतिक विकास भएको छैन भने अध्यात्मले पनि समस्या सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा आशीर्वाद मात्र दिने आउँछन् ।
तपाईकहाँ धेरै थरी मानिस आउँछन् । व्यापारी, उद्योगी, नेता, पत्रकार हरेक वर्ग आउँछन्, उनीहरू के भन्छन्, कस्तो समस्या सुनाउँछन् ?
यहाँ आउने हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नो कारण छ । यो प्रकृतिको रूपले पनि धेरै शान्त र मनमोहक ठाउँ छ । पर्यावरणको दृष्टिकोणले रमाउन पनि आउँछन् । एकथरी मान्छे प्रकृतिसँग रमाउन आउँछन् । अर्काेथरी मान्छे तनावबाट कसरी छुट्कारा पाउने भन्ने सोचले आउँछ । बाहिर जीवन तनावपूर्ण भइरहेको छ । लगभग विक्षिप्तको अवस्थामा पुगिसकेको पनि छ । एक्सपोजर भयो भने युद्ध पनि हुन्छ । त्यसैले शान्ति, आनन्दका लागि पनि यहाँ मान्छेहरू आउँछन् । बाहिर पूरा स्वार्थको संसार छ । मान्छे कुरा पाँच मिनेट तबमात्र गर्छ जब उसलाई केही लिनु छ । यहाँ त्यस्तो कुनै स्वार्थ छैन । व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन । यसो भयो भने त्यसो भयो भने फाइदा हुन्छ भन्ने हामीलाई छैन । हामीले एकअर्कालाई बिनास्वार्थ माया प्रेम गरिरहेका हुन्छौं ।
तपार्इंहरू अध्यात्मलाई बढी जोड दिनुहुन्छ, सबै मानिस यतातिरै आए भने विकासको पूर्वाधार, विकासका सूचकहरू ठप्प हुने त होइन ?
एकदम हुँदैन । खासमा स्वस्थ अध्यात्मक बढ्यो भने काम गर्ने जाँगर, जोस दिन्छ । ओशोले भनेजस्तै वैज्ञानिक अध्यात्म हुनुपर्छ । यो आशीर्वाद, प्रवचन मात्र दिने, अध्यात्मले हुँदैन । स्वस्थ्य र वैज्ञानिक अध्यात्मले आत्मविश्वास बढाउँछ । आफै गरेर देखाऊँ भनेर उत्साह देखाउँछ । त्यसैले यसरी अगाडि बढ्ने हो भने अध्यात्मसँगसँगै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । जबसम्म हामी स्वस्थ्य हुँदैनौं, शान्त हुँदैनौं तबसम्म हामी सिर्जनशील हुँदैनौं । हामी सिर्जनशील हुन, जाँगर बढाउन, स्वस्थ्य हुन आध्यात्मिक हुन जरुरी छ । त्यसैले अध्यात्मले विकास पूर्वाधार ठप्प होइन कि विकास पूर्वाधार बढाउँछ ।
पश्चिममा हामी पूर्वीय दर्शन लगेर केही कमाउन सक्छौं । दर्शनसँगै हामीले पश्चिमालाई दिन सक्ने सामथ्र्य अरू के–के हुन सक्छ ?
पश्चिमाहरूलाई हामीले हाम्रो अध्यात्म दिएर कमाउन पनि सक्छौं, तर अहिले संसार ग्लोबल भिलेजका रूपमा आएको छ । राष्ट्रियताको नाराले मात्र पुग्दैन । आफ्नै देशको उत्पादन प्रयोग गरौं भने पनि सम्भव छैन । त्यसैले अरूबाट लिन सक्ने र हामीले दिन सक्ने के छ, त्यो हेर्नुपर्छ । अमेरिकामा अमेरिकी झन्डा चाइनाबाट आउँछ । हाम्रा हिन्दू देवीदेवताका पोस्टर, मूर्ति चाइनाले बनाएर बेचिरहेको छ । त्यसैले हामीले के दिन सक्छौं त्यो दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा प्राकृतिक सौन्दर्य, हाम्रा जडिबुटी, यहाँको अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनमार्फत हामीले धेरै कमाउन सक्छौं । सानो हङकङ टापुले ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा ५ करोड पर्यटक भिœयाएको छ । हामीले १० लाख लक्ष्य लिँदा पनि त्यो पूरा गर्न सकेनौं । १० लाख लक्ष्य लिनु ज्यादै क्षुद्र अवस्था हो । हामीले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।
हामीले १० वर्षभित्र ३० लाख पर्यटक, ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउनुपर्छ र यो सम्भव पनि छ । यो लक्ष्य जसले लिन्छ त्यसलाई नै हामीले भोट दिनुपर्छ । अरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ र राजनीति यसैका लागि हुनुपर्छ । अहिले हेर्नुस्, नेपालको अवस्था कस्तो छ । एयरपोर्ट र एयरलाइन्सबिनाको देश भएको छ । दुनियाँमा कहाँ छ यस्तो अवस्था ! अहिले भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो । यस्तो अवस्थामा पनि टुरिस्ट आइराखेका छन् । जहाज किन्ने कुरा मैले २२ वर्षदेखि सुनेको छु । अझै त्यही विवादमा छौं हामी ।
हाम्रो नीति–निर्मातालाई किन यस्तो सोच आउँदैन ?
उहाँहरू यस्तो विषयमा गम्भीर नै हुनुहुँदैन । हामी जस्तो जंगलमा आएर ध्यान र अध्यात्म चिन्तन लिनुहुँदैन । यदि निःस्वार्थ ढङ्गले सोचेको भए केही हुन्थ्यो । उहाँको हरेक निर्णयमा स्वार्थ छ । मलाई के फाइदा होला । पार्टीलाई के फाइदा होला, यस्तै सोच्नुहुन्छ । हेर्नुस म विदेश जान्छु मेरो हृदय यति रुन्छ । त्यहाँ हरेक पटक जाँदा नयाँ–नयाँ प्रगति हुन्छ । नजिकै भारतलाई हेर्नुस्, त्यो पनि गरिब देश हो तर पनि त्यहाँ काम भइराखेको छ, विकास भइराखेको छ । नेपालमा फर्कर आउँदा पहिला बनेका पूर्वाधार भत्केको हुन्छ । एयरपोर्ट झन् जीर्ण बनेको पाउँछौं । हामी गरिब होइनौं । हामीलाई गरिब हुन बाध्य बनाएको छ ।
हाम्रो राजनीतिले राम्रो नेतृत्व भेट्टाएको छैन र जन्माएको पनि छैन । जस्तो चाइनाको पेन चाङ्ग पी नभएको भए चाइनाको अहिलेको विकास सम्भव थिएन । त्यस्तै नजिकको विहार हेर्नुस्, एक्लो नितिशकुमारले विहारलाई कस्तो बनाए । गुजरात हेर्नुस्, मोदीले बनाए । सिंगापुर पनि एकै व्यक्तिले बनाए । त्यस्तो एक व्यक्ति हामीकहाँ भएन या भनौं फस्टाउन दिइएन । त्यस्तो एक नेतृत्व भयो भने नेपाल १० वर्षमा बन्न सक्छ ।